Vol. 17 JULAYI, 1913. 4
AKUKHO lizwe likhululekile kwinkolelo yesiporho. Kweminye imimandla yehlabathi ixesha elininzi linikwa iziporho; kwezinye iindawo, bambalwa abantu abacinga ngazo. Iiprisi zibambe iingqondo zabantu baseYurophu, e-Asiya nase-Afrika. EMelika ambalwa amakholwa xa kuthelekiswa iziporho. Kodwa iicos zemveli ezithunyelwa kwamanye amazwe ziya zanda, ezintsha ziyaphuhliswa, kwaye iMelika inokuthi, ekuphuhlisweni kwezipoki kunye neenkolelo zayo, iphumelele okanye iphuculwe koko ilizwe lakudala linako.
Kumazwe amadala iziporho zomelele kwaye zininzi kuneMelika, kuba abantu belo lizwe bagcine iziporho zabo ziphila ixesha elide, ngelixa eMelika amanzi olwandle ehlamba kwiindawo ezinkulu zomhlaba; kwaye abahlali abaseleyo kwiindawo ezomileyo babengekho baninzi ngokwaneleyo ukugcina iziporho zempucuko yakudala iphila.
Ukukholelwa kwiziporho akukho mvelaphi yanamhlanje, kodwa kufikelela ebuntwaneni bomntu, kunye nobusuku bexesha. Bazame kangangoko banakho, ukuthandabuza, ukungakholelwa kunye nempucuko azinakuhlahlisa okanye zifeze iinkolelo kwiziporho, njengoko iziporho zikhona kwaye zinemvelaphi yazo emntwini. Zikuye kwaye zezakhe, ezakhe inzala. Bamlandela ukutyhubela iminyaka kunye nohlanga kwaye, nokuba uyakholelwa okanye akakholelwa kubo, baya kuthi, ngohlobo bakhe, bamlandele okanye benze njengoko izithunzi zakhe zimlandela.
Kwilizwe elidala, ubuhlanga kunye nezizwe zinike indawo kwezinye izizwe kunye nezizwe kwiimfazwe kunye noloyiso kunye namaxesha empucuko, kwaye iziporho kunye nezithixo kunye needemon ziye zaqhubeka nazo. Izixhobo zexesha elidlulileyo kunye nexhaphaji elidlulileyo kunye nokuhambahamba kumhlaba wehlabathi elidala, ngakumbi kwiindawo zentaba kunye ne-heaths, iindawo ezityebileyo ngezithethe, intsomi kunye nembali. Izikhuseli ziyaqhubeka nokulwa amadabi abo exesha elidlulileyo, ukuphupha ngamaxesha oxolo phakathi kweziganeko eziqhelekileyo, nokubeka ezingqondweni zabantu imbewu yemisebenzi yexesha elizayo. Umhlaba wehlabathi elidala awuzange ube phantsi kolwandle kangangeminyaka emininzi, kwaye ulwandle alukwazanga ukulihlambulula ngesenzo samanzi alo kunye nokulenza likhululeke kwiziporho zabaphilayo abaphilayo nabafileyo kwiziporho zabantu soze umntu.
EMelika, impucuko zangaphambili ziyacinywa okanye zingcwatywe; ulwandle luhlambe amaphecana amakhulu omhlaba; amaza aqhekeze kwaye azalisekisa iziporho kwaye uninzi lobubi bomsebenzi womntu. Xa umhlaba waphinda wenyuka wahlanjululwa kwaye ukhululekile. Amahlathi ayasasazeka kwaye ayakrokra malunga nephecana xa sele elinyiwe; Iintlabathi zentlango zikhazimla apho kungcwatyelwa khona amanxiwa ezixeko ezinekratshi nabaninzi. Iincopho zeentambo zemixokelelwane zasezintabeni yayiziziqithi ezinamaphiko okusasazeka kwizizwe zemveli, ezaziphinda zigqithise umhlaba otshisiweyo ekuphumeni kwawo ukusuka enzonzobileni, kukhululeke kwiziporho zakudala. Esi sesinye sezizathu zokuba iMelika izive ikhululekile. Kukho inkululeko emoyeni. Kwihlabathi elidala inkululeko enjalo ayivakali. Umoya awukhululekanga. Isibhakabhaka sizaliswe ziziporho zangaphambili.
Izinto ezihlala zenziwa rhoqo kwiindawo ezithile ngakumbi kunezinye. Ngokubanzi, iiakhawunti zeziporho zimbalwa esixekweni kunakwilizwe, apho abahlali bambalwa kwaye bekude phakathi. Kwizithili zemfundo ilizwe liguqika ngokulula ngakumbi kwiingcamango zendalo kunye ne-elves and fairies, kwaye iphinde ibalise iintsomi zazo, kwaye igcine iziporho eziphilayo ezizalwe ngumntu. Esixekweni, ukungxama kweshishini nolonwabo lubambe ingcinga yamadoda. Amadoda awanalo ixesha leziporho. Isiporho seLombard's Street kunye neziporho zeWall Street azenzi, ngenxa yoko, azitsali ngcinga zomntu. Ukanti kukho iziporho ziphembelela kwaye zenze ukuba ubukho bazo buve, kanye njengakwiziporho zehamile, nestling ecaleni kwentaba kufutshane nehlathi elimnyama, kunye nemilambo kumda wento.
Indoda yalomzi ayivisisani nezifo. Akunjalo ke, umntu osentabeni, umgcini kunye nomatiloshe. Imilo engaqhelekanga enika imiqondiso ibonakala emafini. Iifom zobuninzi zihamba phezu komgangatho wehlathi. Banyathela kancinci ecaleni komphandle kunye nomqhaphu, baqubude kumhambi okanye babe zizilumkiso. Amanani amnyama kunye nawomoya ahamba i-moors kunye namathafa okanye amanxweme akwanti. Ziphinda zihambe ezinye zenzeka emhlabeni; baphinda benze idrama yolwandle. Indoda yomzi ingaziqhelanga iintsomi ezinjalo, iyabahleka; uyazi ukuba abanakuba yinyani. Kodwa ukungakholelwa kunye nokugculelwa uninzi olunjalo, kunike ithuba lokuqiniseka okoyikekayo, emva kokundwendwela indlu apho indalo ithanda ukubonakala kwesiporho.
Ngamaxesha athile ukukholelwa kwiziporho kusasazeka ngokubanzi kunakwabanye. Ngokwesiqhelo oku kunjalo emva okanye ngexesha lemfazwe, iindyikitya zokufa, izifo. Isizathu kukuba intlekele nokufa kusemoyeni. Ngexesha elincinci kwaye ungafundiswanga ngokufunda, ingqondo iguqulwe kwiingcinga zokufa, kwaye emva. Inika abaphulaphuli kwaye inika ubomi kwimithunzi yabafi. AmaXesha Aphakathi ayelilixesha elinjalo. Ngamaxesha oxolo, xa ukunxila, ukubulala kunye nolwaphulo-mthetho kusenciphile-ezo zenzo ziyazala kwaye ziphumeze iziporho-iziporho azininzi kwaye zincinci ubungqina. Ingqondo iguqulwe kwilizwe lokufa yaya kulo mhlaba kunye nobomi bayo.
Izixhobo zokungena zingena kwaye zidlule ekubeni nokuba umntu akazazi nokuba ziphi na, nokuba unika into eninzi okanye ucinga kancinci. Ngenxa yomntu, iziporho zikhona. Ngelixa umntu eqhubeka njengengcinga kwaye eneminqweno, iziporho ziya kuqhubeka zibakho.
Ngazo zonke iintsomi zesiporho esixeliweyo, iirekhodi ezigciniweyo kunye neencwadi ezibhaliweyo malunga iziporho, kubonakala ngathi akukho lungelelwano malunga neendidi kunye neendidi zesiporho. Akukho luhlu lweziporho olunikiweyo. Akukho lwazi lwesayensi yezesiporho isemnyango, ukuba umntu ubona isiporho, angazi ukuba loluphi uhlobo lwesiporho. Umntu unokufunda ukwazi kwaye angoyiki izipoko njengezithunzi zakhe ngaphandle kokuzinika ingqalelo kakhulu okanye aphenjelelwe zizo.
Umxholo ungomnye unomdla, kwaye ulwazi lwalo olunento yokwenza nenkqubela phambili yomntu, lixabiso.
(Ukuqhubeka kumagazini ka-Agasti Ilizwi)